Umhla My Pet » Njani ukubona Ukuthandana Online Fake Profile?
ukubuyekezwa: Jul. 07 2020 | 3 min ukufunda
“Wazi njani ukuba iprofayili kukuba into wokwenene kungekhona yenziwe ukuze ube isiza ukuthandana online? Ungafumana ezininzi emails ukusuka site ukuthandana ukuze bendiya bangazibandakanya, kwaye ke emails uyeke nje. Yintoni na loo?”
Ukuphepha ukuqhatha ukuthandana online, ndlela ibhetele kukuba kunamathela kwiziza ukuthandana online ezinkulu eziye ngeenxa iminyaka embalwa kwaye kwisiseko ilungu elikhulu. Abayi ayamnkele, kodwa mna ngokobuqu ndikubonile ezinye pad iisayithi ukuthandana amancinane okanye zinqabileyo '’ kwiwebhusayithi neeprofayili ukuqhatha de aye kangangoko ukuthumela umyalezo kumalungu abo kolu 'olungelulo olokwenyani’ umntu uuthemba adala umsebenzi engaphezulu kwisiza.
ezinkulu, kakuhle kakhulu iziza eyaziwa ukuthandana akukho sizathu ukwenza oku kwaye abasebenzi umsebenzi umninindlu ukuba esweni ii-akhawunti ezintsha ukhula ngaphandle spammers kunye scammers ngokubanzi. Iziza ezinkulu kwakhona umfanekiso wonke ukukhusela, osebenza egameni lakho. Ukuba ukrokrela umntu lokuba bezo okanye scammer, ukuqinisekisa ukuba ingxelo ngoko nangoko kwiqela inkxaso-website.
Kutheni imiyalezo ayeke emva kokuba bazibandakanye?
Kukho iintlobo zonke izizathu ukuba ngumntu wokwenene isenokungaphenduli imiyalezo yakho yaye abaninzi kubo nanto yakwenza nawe buqu. Mhlawumbi ba xakeka ngokwenene, idolophu liye ekhefini, okanye isigqibo ukuba ukuthandana Intanethi nje into yabo. Eyona nto ibalulekileyo apha kukuba asifanele mabangabatyhafi. Kukho ezininzi intlanzi ngakumbi elwandle.
Ndikucebisa uzama ukuthumela imiyalezo ezimbalwa ekuhambeni Kwiiveki ezimbalwa phambi kokuba isigqibo ukuba anikezele ngokupheleleyo. Ke ngoku, ukuba ngaba musani apha nantoni, Qhubeka.
Kukho iimeko apho umntu menyu unako ukuba scammer izama ukuqhagamshelana nawe ngenxa yaso nasiphi na isizathu. Ezo ngxelo idla ngokufunyanwa kwaye kupheliswe ngokukhawuleza kwiziza ukuthandana enkulu. Ngoko ngexesha osabela, akhawunti sele icinyiwe.
Ungafuna kwakhona ufumane Iqwabaz evela intombazana ongavunyelwayo eneneni ekuhayikheni ilungu kweso siza. Ukuba abahlomela umyalezo yena kuye ukuze abe nakho ukuphendula ngaphandle kokuba paysÖ yaye ukuze sikulungele ukwenza ukuba. Ukuba akukho ayavuma ukuba ahlawule ukuthetha nawe, ke yena akafanelekanga ngexesha analo. Ugqithele intombazana cute elandelayo kuluhlu lwakho.
hoyi. njani ukuba abantu lokwenene kwi scammers?
“hoyi” bachazwa njengabo izinto ezincinane ukuba ungakhangela kwiprofayile yomntu ezibonisa iprofayile inokuba ukuqhatha. Nangona kukho ngokwenene akukho ndlela ukwazi ngokuqinisekileyo ukuba iprofayili wokwenene okanye ukuqhatha, kukho ezinye hoyi ukuba kufuneka alumkele.
Nantsi eminye imizekelo into ukuthini xa ndithi “hoyi”.
– Loo mntu uthi wena ukukhangela kuye phandle kwindawo website eyahlukileyo. Oku ungaqhuba ube iprofayili yokwenene, kodwa kwakhona kuba isimemo ungena kwisayithi iPorn.
– Ukuba umfazi uthe ongazange wadibana, ekuthumelela umyalezo ukuba phambili kakhulu kwaye flirty, yena ukuze abe lilungisa imodeli iPorn okanye cam intombazana uzama okutyekisayo ukuba site yakhe, okanye ebilihenyukazi uzama ukufumana kubaxhasi.
– Umfana sise ngokwenene esikhulu okanye intombazana (esithetha quality imodeli super) ekuthumelela umyalezo nangona na kufakwa ifoto okanye uzalise iprofayile yakho.
– Igrama kwi pro mgangathweni kakhulu kwaye izandi zangaphandle. Kukho kakhulu indawo spammers, rhoqo baseRashiya Nigeria (kunye nezinye iindawo ezininzi), ukuba ngqa iziza ukuthandana kunye nezinye iindawo yenethiwekhi yoluntu, ezifana MySpace kunye Friendster.
– Ukuba umntu ocela iinkcukacha zakho ezifana nenombolo yefowuni, idilesi, okanye naluphi na olunye uhlobo lolwazi lobuqu okanye zemali, ukuze nje ukuba usebenzisa site ukuthandana ukuqokelela ulwazi ukusebenzisa ngenxa yobusela yesazisi okanye ezinye scam yobuqhetseba.
– Ukuba nangasiphi na isizathu, umntu okanye umyalezo ngathi ukuba kulungile kuyinyaniso ', oku kufanele ukuba silumke.
Mna andikanyuki, esithi, Uze ungabi ukuphendula imiyalezo ukuhlangabezana ezi nqobo, kodwa ukuba wenza, ukuyihamba ngobulumko!
Uya kuba kuhle ukuba usebenzisa nje ingqiqo. khumbula, ngekhompyutha okanye hayi, imithetho ekhoyo ehlabathini asasebenza.